farshaxanka Walaha Momo ayaa beeniyay oo ka digay geerida fanaan Sidiki Diabaté - teles relay
fanaanka Walaha Momo ayaa beeniyay kana digay geerida fanaan Sidiki Diabaté
Dhowr saacadood hadda, xanta ku saabsan geerida fanaankii caanka ahaa ee reer Mali Sidiki Diabaté ayaa ku soo duulay webka sida dabka duurka oo kale. Si kastaba ha noqotee, waxaan wali dooneynaa inaan u xaqiijino dhamaan Amiirka taageerayaasha Kora in tani ay tahay xan, war been abuur ah.
Fanaanka ayaa runtii nool. Xitaa haddii diiwaanka dahabka uu hadda ka aamusan yahay shabakadaha bulshada ee ku saabsan ogeysiiska degdegga ah ee dhimashadiisa, farshaxanle kale oo weyn oo ka socda waddanka Soundiata Keita iyo saaxiib shaqsi ah oo ka tirsan qofka Walaha Momo ayaa sameeyay diidmo rasmi ah.
Laakiin yaa sidaa ugu cadhooday farshaxankii horeba lacagtiisa ugu bixiyay madaama uu garaacay oo afduubay saaxiibkiis oo loo yaqaan Mama Sita? Maxaan dhihi karnaa, raadi isaga Sidiki Diabaté wuxuu si daran ugu xanuunsanayay qolkiisa xabsiga.
Laakiin sida laga soo xigtay eheladiisa wuxuu helay daryeel sax ah wuxuuna umuuqday inuu sifiican usocdo. Intaa waxaa sii dheer boggiisa facebook ee aan kala tashanay, wuxuu hadda ku jiraa dhiirrigelin buuxda si uu u sii daayo albumkiisii ​​ugu dambeeyay, oo filimkiisa oo horeyba u ahaa 2 milyan oo aragti 48 saacadood gudahood.
Inta aan sugeyno inaan wax yar ka ogaano, ma joojin doonno ku celcelintooda, aad uga taxaddar ka hor intaadan gudbin ama aan ku dirin macluumaadka shabakadaha bulshada, adigoon ogayn inaad qatar gelinayso nolosha dadka.
Fatoumata Ba: "Markaad ku hadlaysid Faransiis, dhalinyaro iyo Afrikaan, waxaad la kulmi doontaa biriiga" [5/5] - Video
Celine Dion Muujinta Muuqaalka 1,000th - Video